Accueil Tahirin-tsoratra Archive
Ny Famonjena no antony nahatongavan'i Jesosy
Auteur: M A Daoud
Ny Famonjena no Iohateny FOTOTRA ao amin'ny Filazantsara, sady hafatra lehibe indrindra nomena ny olona : «Hiteraka ZAZALAHY izy ary ny Anarany atao hoe : JESOSY, satria Izy no HAMONJY ny olony HO AFAKA amin'ny FAHOTANY». Mat. 1:21. Nilaza mialoha ny f...
Ahoana no hiofanana ho amin'ny asan'Andriamanitra
Na iza na iza no maniry hiofana ho amin' ny asan' ny Tompo dia tokony hahatsapa fa ny fiainana anatiny manokana eo anatre­han' Andriamanitra no fanoitra fototra ho amin' ny fahombiazana sy fisondrotana ara-panahy. Liana kokoa Andriamanitra mijery ny fiai...
Tsy maintsy miasa isika raha mbola antoandro ny andro
Hoy Andriamanitra, "Anaka, miasà any an-tanimboalo­boko ..." Isika no vavolombelony. Izay no hany antony ametrahan' Andriamanitra ny zanany eto amin' izao tontolo izao, ho vavolom­belona sy fanasina amin' ity izao tontolo izao mahantra ity. Mety hiteny...
Ahoana no fomba hitehirizana ny Fitahiana 4 (tohiny)
Tsy ny fahamarinana rehetra tsy akory io, nefa misy faha­marinana lehibe eo ; Tsy mety misy fiainana ara-panahy sy faha­salamana ankoatra ny miasa ho an' Andriamanitra sy ho an' ny fa­nahin' olona. Io no zava-miafin' ny fitomboana sy ny fifaliana ara-p...
Ahoana no fomba hitehirizana ny Fitahiana 3 (tohiny)
2 — Tokony haka fotoana isika handinihana amin' ny fanahy mivavaka ny Tenin' Andriamanitra. Ny Tenin' Andriamanitra no sakafon' ny finoana. Mahazo faka lalina kokoa ny fiainana kristiana amin' ny fitsentsefana kokoa ny fahalalana ny Tenin' Andriamanitr...
Ahoana no fomba hitehirizana ny Fitahiana 2 (tohiny)
Soso-kevitra vitsivitsy ny amin' ny fomba hanaovantsika izany no hamonjy ny maro tsy ho amin' ny fahalavoana ara-panahy. 1 — Tsy maintsy mandeha amin' ny mazava isika... Ny fano­loran-tenantsika dia tokony hiaraka amin' ny faritra miha-mala­laky ny f...
Ahoana no fomba hitehirizana ny Fitahiana
Tsy misy dingana eo amin' ny fiainana kristiana izay tsy raisin' Andriamanitra sy ny olona miaraka. Hatramin' ny voalohany ka hatramin' ny farany eo amin' ny asam-pamonjena, dia tsy maintsy misy asa avy amin' Andriamanitra sy ny olona. Ny teny hoe MITAHIR...
Fitaovana ampiasain'Andriamanitra (tohiny)
MILA ANAO NY TOMPO. Tsy misy fahamarinana ara-pa­nahy sy mifono zava-miafina ohatra ny hoe Kristy lohantsika dia tena miankina tanteraka amin' ny momba ny tenany mba haha­tanteraka ny tarigetram-pamindrampony eo amin' izao tontolo izao mihalevona ! Ny f...
Raha marina fa ny fahombiazan' ny fitaovana (fiasana) dia miankina amin' ILAY MAMPIASA AZY, ary eo amin' ny asa kris­tiana "Ny fahambonian' ny hery" dia avy amin' Andriamanitra fa tsy avy amintsika, dia marina koa anefa fa ny maha-mifanentana ny fitaovan...
Mahasoa ho an'ny Tompo 2 (tohiny)
Ny fahamasinana sy ny hoe mahasoa dia mifampiankina. Mety misy maningana nefa izao no fitsipika : Izay hamasinin' Andriamanitra ho amin' ny asany dia homeny voninahitra amin' ny fahombiazana ! Tsy ny saina tsy akory, na dia mamirat...
Mahasoa ho an'ny Tompo
Ny Mahasoa ho an' ny Tompo dia midika hoe "fahamen­drehana". Ny hoe "mahasoa" dia ilay olona tena ilaina — mifanen­tana tsara amin' ny zava-kendrena ilain' ny Tompo hotanterahan' ny olona. Raha te-hitarika rano madio avy any an-dohasaha ho ao amin' n...
Fanaka omem-boninahitra 3 (tohiny)
Ny hevitra fototry ny fanamasinana dia fisarahana. Mana­masina ny tenany ny olona iray rehefa manasaraka ny tenany tsy ho amin' izay rehetra ratsy sy tsy madio, ka manokana ny fiainany manontolo ho amin' ny fanaovana ny sitrapon' Andriamanitra ! Amin' io...
Nisy mpanoratra iray fahiny niteny tamim-pahendrena hoe : 'Misy sokajy roa ny kristiana. Miaina amin' ny fiainana tsy misy rahoraho ny ankamaroany, manao asa soa betsaka, mitady ny mifady ny faharatsiana lehibe,mamonjy fiangonana, ...
Fahamasinana sy Fakam-panahy 2 (tohiny)
Avela ho tonga ny fitsapana noho ny antony. Ny faharesena tsirairay dia mamela antsika halemilemy kokoa hiatrika ny ady manaraka, fa ny fandresena tsirairay kosa mahatonga antsika ha­tanjaka kokoa. Ny fitsapana mandrakariva dia tonga amin' ny faritra ma...
Fahamasinana sy Fakam-panahy
Mitsahatra ny ady ao anaty rehefa voadio ho afaka amin' ny ratsy ny fo. Ny ady amin' ny nofo dia mifarana rehefa voaroaka avy ao amin' ny fanahy izay rehetra fanoherana an' Andriamanitra. KRISTY NO MANJAKA tsy misy mandrafy ! Misy anefa fahavalo hafa ank...
Mba tsy hahadiso làlana anao, na mpivavaka ianao na jentilisa, na iza na iza mamaky ity, dia indro atoronay anao amin’ny Anaran’i Jesosy Tompo ny fomba hidirana ny lanitra Ary hoy Jesosy tamin’ny olona : Miseseha hiditra amin’ny ...
Miara mandeha amin'Andriamanitra (tohiny 3)
3° — FANDROSOANA : Tsy mihemotra na oviana na oviana Andriamanitra, ary raha miara-mandeha Aminy isika dia tsy hanao izany na oviana na oviana ! Ny fandehanana dia fihetsika mitovy sy miaraka, din­gana mifandimby, ka ny tsirairay dia mialoha ny teo a...
Miara mandeha amin'Andriamanitra (tohiny 2)
2° — FIOMBONANA : Raha miresaka fananana fiombonana amin' i Kristy isika, izay tiana holazaina dia fiombonam-po. Rehefa mifampiresaka isika dia fo mankamin' ny fo. Ny fisakaizana akaiky sy fifanka­zarana dia fiaraha-mandeha ara-panahy. "Ny firaisanay...
Miara mandeha amin'Andriamanitra (tohiny)
Ny fiaraha-mandeha amin' Andriamanitra dia mifono zava­tra telo fara-faharatsiny : 1°— FIARAHANA : Ity fahatsapana ity dia tenifikasan' ny Tompontsika tamin' ny mpianany (Jao. 14 : 21-24), ilay tsy azon' i Joda raha niteny hoe : 'Tompoko, nahoana no...
Ny fahasambarana amin'ny fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra
Raha tsy mifanaraka amin' ny Tenin' Andriamanitra ny fiai­nantsika, na dia amin' ny didy iray aza (na izay voasoratra) dia mbola tsy mendrika na vonona ho amin' ny lanitra isika. Tsy azo ekena na oviana na oviana ho any an-danitra isika raha tàhiny mand...